News 18 Nepal || नेपाल फर्किने टिकट काटेका गगन कोरियामै अस्ताए
नेपाल फर्किने टिकट काटेका गगन कोरियामै अस्ताए
काठमाडौं । इपिएस प्रक्रियामार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया आएका सुर्खेत, चौकुने–४ बिजौराका गगन रावलको सोमबार राति निधन भएको छ । दक्षिण कोरियाको एजुसी भन्ने ठाउँमा कार्यरत गगन पहिलो कार्यकालको चार वर्ष १० महिना अवधि पूरा गरी अबको नौ दिनपछि नेपाल फर्किने टिकटसमेत काटेर तयारी अवस्थामा थिए ।
एउटै कोठामा बस्ने नेपाली सहकर्मीका अनुसार गगन सोमबार दिउँसो कम्पनीमा राम्रै काम गरी सुतेका थिए । राति कोरियाली समय अनुसार करिब २:३० बजे उनी एक्कासि ठूलो आवाजले चिच्याएका थिए । उक्त आवाज सुनेर ब्युँझिएका सहकर्मीले हेर्दा उनी बेहोस अवस्थामा थिए । तत्काल कम्पनी साहुलाई जानकारी गराई एम्बुलेन्समार्फत नजिकैको अस्पताल पुर्याइएका उनलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो ।
हाल उनको शव परीक्षणका लागि अस्पतालमा राखिएको छ । घटनाको बारेमा घरपरिवार तथा राजदूतावासमा जानकारी गराइसकिएको र शवलाई केही दिनमै नेपाल पठाउने तयारी रहेको साहित्यकार भोजराज घोडासैनीले बताए । घटनाको प्रकृति हेर्दा हृदयाघात भएको हुन सक्ने सुर्खेत समाज दक्षिण कोरियाका पूर्वअध्यक्ष लोकेश खत्रीले बताए । गगन सुर्खेत समाज दक्षिण कोरियाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका थिए । रासस
कोरोनाले विदेशमा थप ३ नेपालीको निधन, कति संक्रमित थपिए ?
आजबाट कतारमा थप कडाई, दूतावासको नेपालीलाई यस्तो आग्रह
अमेरिकामा कुटिए नेपाली लिफ्ट चालक सापकोटा
साउदीमा कोरोना संक्रमणबाट ८९ नेपालीले गुमाए ज्यान
रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका नेपाली युवाको निधन
कोरियामा एक नेपालीको गयो ज्यान, को हुन् उनी ?
मलेसियामा गैरकानूनी रुपमा बसेका नेपालीसहित २ सय बढी समातिए
विदेशमा कोरोनाबाट थप दुई नेपालीको निधन, कति थपिए संक्रमित ?